Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Gaajada Caalamka Dhibaato Weyn Waxaad Dhahdaa Dadka Mareykanka Badankood
“Inta badan dadka Mareykanka ah waxay aqoonsadaan in gaajada adduunka ay tahay dhibaato halis ah, iyo in dhibaatada cimiladu ay tahay dhibaato gaajo. Hadda, hoggaamiyeyaasheenna waa inay dardar geliyaan sidii aan wax uga qaban lahayn tabashadeenna, ”ayuu yiri Dr. Charles Owubah, Maamulaha, Action Against Hunger.
Si loo xuso Maalinta Cunnada Adduunka 16 -ka Oktoobar, Action Against Hunger, oo ah hoggaamiye aan macaash doon ahayn ee dhaqdhaqaaqa caalamiga ah si loo joojiyo gaajada, ayaa maanta soo saartay natiijooyinka sahan lagu sameeyay in ka badan 2,000 oo qaangaar ah oo Mareykan ah oo uu sameeyay wakiilkooda The Harris Poll oo muujinaya in 86% dadka Mareykanka ah aaminsan in gaajada adduunka ay weli tahay dhibaato halis ah. 73% dheeraad ah oo Mareykan ah ayaa sheegaya in isbeddelka cimiladu uu kordhin doono gaajada ka dhex jirta bulshooyinka adduunka ugu saboolsan, in ka badan kala bar (56%) jawaabeyaasha ayaa leh waddamada hodanka ah, sida Mareykanka, waa inay ka caawiyaan waddamada dakhligoodu hooseeyo inay bixiyaan kharashaadka la-qabsiga cimilada beddel.
“Adduunka oo dhan, 811 milyan oo qof ayaa gaajo seexda habeen walba - meelo badan oo adduunka ah, gaajadu waxay noqon kartaa mid dilaa ah. Waa inaan maalin walba sameeynaa Maalinta Cunnada Adduunka ilaa aan ka gaarno hadafkeenna ah inaan qof walba gaajadda u joojinno, si wanaagsan, ”ayay raacisay Dr. Owubah.
Natiijooyinka sahaminta dheeriga ah waxaa ka mid ah:
• Ku dhawaad ​​kala bar dhammaan dadka Mareykanka ah ayaa ka walwalsan kororka sicirka cuntada taas oo ka dhalatay isbedelka cimilada. Intaa waxaa dheer, 46% dadka Mareykanka ah ayaa sheegay in welwelka ugu weyn ee cimilada ee jiilka soo socda ay tahay "ku noolaanshaha adduun cunto yar (yacni, cunno yari badan sababtoo ah naxdinta cimilada)."
• Boomers waxay u badan tahay inay sheegaan in gaajada adduunka ay weli tahay dhibaato halis ah. Ogaanshaha gaajada adduunka oo ah arrin halis ah ayaa tiro ahaan aad muhiim ugu ah Boomers (da'doodu u dhaxayso 57-75) kuwaas oo aad ugu badan Gen Z (da'aha 18-24) iyo Gen X (da'doodu u dhaxayso 41-56) si ay u rumaystaan ​​gaajada adduunka inay weli tahay arrin halis ah adduunka maanta (89% vs 81% iyo 83%).
• 75% dadka Maraykanku waxay u malaynayaan in isbeddelka cimiladu uu khatar ku yahay mustaqbalka qowmiyadda aadanaha, 74% waxay rumaysan yihiin in dhammaanteen - oo ay ku jiraan kooxaha sida dawladda, kuwa aan macaash doonka ahayn, iyo ganacsigaba - ay tahay inaan wax badan ka qabanno isbeddelka cimilada. Daraasad tan la mid ah oo ka timid Action Against Hunger UK ayaa walaacyo la mid ah ka dhex heshay dadweynaha halkaas ku nool.
• 60% ragga, 68% Gen Z, iyo 76% Madowga Ameerika waxay rumeysan yihiin in waddammada hodanka ah, sida Mareykanka, ay tahay inay ka caawiyaan waddamada dakhligoodu hooseeyo inay bixiyaan kharashaadka la-qabsiga isbeddelka cimilada. Ragga dhexdooda, 60% ayaa ku raacsan habkan, marka la barbar dhigo 53% dumarka. 76% dadka Madowga Ameerikaanka ah ee aan ahayn Isbaanishku waxay ku raacsan yihiin dareenkan, marka la barbardhigo kaliya 50% dadka aan ahayn Hispanic-ka Mareykanka cad iyo 61% dadka Hispanic Ameerika. 68% Gen Z iyo 65% Millenniyadu waa isku raacsan yihiin, maadaama kaliya 52% Gen X iyo 47% Boomers.
Natiijooyinka Action Against Hunger ayaa ku soo beegmay 2021 Heerka Gaajada Adduunka, kaas oo lagu ogaaday in gaajadu ay weli tahay “mid halis ah, laga naxo, ama aad looga naxo ku dhawaad ​​50 dal” iyo warbixin Qaramada Midoobay ah oo ah in 1 ka mid ah 33 qof oo adduunka ah ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo.
“Wacyigelinta haddii ay tahay tallaabo muhiim ah oo hore. Hadda, adduunku wuxuu u baahan yahay habab wax -ku -ool ah oo la xisaabtami kara si wax looga qabto gaajada iyo isbeddelka cimilada oo sii kordhaya khataraha caafimaadka dadweynaha, ”ayuu yiri Dr. Owubah. “Ku guul darreysiga wax ka qabashada gaajada waxay si weyn u xasilin kartaa dowladihii horeba u nugul, maadaama gaajadu ay tahay sababta iyo saameynta isku dhaca. Markaan maalgelinno la -dagaallanka gaajada iyo badbaadinta nolosha, waxaan maalgelin doonnaa mustaqbalka: cilmi -baaristu waxay muujisay in $ 1 kasta oo lagu kharash -gareeyo la -dagaallanka nafaqo -xumadu ay gaarsiiso bulshada $ 16.
Sahankan waxaa lagu sameeyay gudaha Mareykanka gudihiisa The Harris Poll isagoo matalaya Action Against Hunger intii u dhexeysay Oktoobar 12-14, 2021 oo ka mid ah 2,019 dadka waaweyn ee Mareykanka ee jira 18+. Sahankan onlaynka ah kuma salaysna tusaalaha itimaalka sidaas darteedna lama qiyaasi karo qiyaasta khalad sambal samaynta. Habka sahanka oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan doorsoomayaasha culeyska iyo cabbirrada saamiga koox-kooxeed, fadlan la xiriir Shayna Samuels, 718-541-4785 ama [emailka waa la ilaaliyay]
Action Against Hunger waa hay'ad samafal oo horseedaysa dhaqdhaqaaq caalami ah si loo soo afjaro gaajada nolosheenna. Waxay soo saartaa xalal, waxay u dooddaa isbeddelka, waxayna gaadhaa 25 milyan oo qof sannad kasta barnaamijyo ka hortag iyo gaajo oo la xaqiijiyay. Iyada oo ah hay'ad aan macaash doon ahayn oo ka shaqaysa dhammaan 50 waddan, 8,300 xubnood oo shaqaale ah oo u heellan ayaa shuraako la ah bulshooyinka si wax looga qabto sababaha asalka u ah gaajada, oo ay ku jiraan isbeddelka cimilada, iskahorimaadka, sinnaan la'aanta, iyo xaaladaha degdegga ah. Waxay ku dadaaleysaa inay abuurto adduun gaajo ka madhan, qof walba, wanaag.